အလုပ်အဖွဲ့အဝေးမှအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ Telework, ဆကျသှယျနှင့်ပိုမို Include
သို့မဟုတ်အစဉ်အလာရုံးပတ်ဝန်းကျင်ပြင်ပအဝေးမှအလုပ်လုပ်သူတွေကိုဖော်ပြရန်ယနေ့အသုံးပြုသောကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ၏အတော်လေးနံပါတ်ရှိပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များအချို့ကွဲပြားအဓိပ္ပါယ်များရှိပေမယ့်လည်းအခြားသူများကယ့်ကိုအသီးအသီးအခြားအများအတွက် synonym တွေဟာဖြစ်ကြသည်။ ဒီအထပ်သတင်းရင်းမြစ်အတူတူပါပဲအကြောင်းပြောနေတာနိုင်ပါတယ်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲယဉ်း (လူတွေအမှန်တကယ် telecommute မည်မျှထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေလိုမျိုး) ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရင်းဇယားထွက်ရှာတွေ့စေပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤတွင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဝေါဟာရများနှင့်၎င်းတို့၏ connotations အချို့ကိုကြည့်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းအဖြစ် (အိမ်မှာကနေဥပမာ) ကိုအဝေးမှအလုပ်လုပ်သူတွေကိုအများဆုံးမှန်မှန်ဆကျသှယျသို့မဟုတ် teleworkers ဟုခေါ်ကြသည်။ ပေမယ့် telework နှင့် ဆကျသှယျ အတူတူပါပဲရည်ညွှန်းဟန်, 1973 ထဲမှာစာပိုဒ်တိုများစတင်သုံးစွဲတဲ့သူဂျက် Nilles, စေသည် "ဆကျသှယျ" နှင့် "telework" အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာဂုဏ်ထူး ။ သငျသညျလိုလျှင် အလုပ်-ထံမှ-အိမ်မှာအလုပ်ရှာတွေ့ များစွာသောလူတို့ကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်သူတို့ကိုအသုံးချကတည်းကသျောကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဝေါဟာရများကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
iWorkers, eWorkers, နဲ့ Web အလုပ်သမားများ
အဆိုပါ "iWorkers", "eWorkers" (သို့မဟုတ် "က e-လုပ်သားများ"), နှင့် "က်ဘ်အလုပ်သမားများ" ဒီဇိုင်းကပိုထုဝေးလံသောအလုပ်၏မြင့်မားသောနည်းပညာသို့မဟုတ် Internet-based သဘာဝကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုသူတို့ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်နေရာတိုင်းမှာ, ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ Off-site ကိုပြုမိဖို့နေ့တိုင်းပိုပြီးလုပ်သားများကို enable ပြုလုပ်နည်းပညာအသစ် tools များဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပင်ခေတ်မှီဘို့, ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းအလုပ်သမားများ 2.0 အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
ဆကျသှယျ / teleworkers ထံမှကွာခြားချက်များ: အလုပ်-ထံမှ-အိမ်ပြန်န်ထမ်း e-အလုပ်သမားများ, iWorkers, နဲ့ Web အလုပ်သမားများ (ကမှာဥပမာအခြားနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ဆကျသှယျမကြာခဏစဉ်းစားနေချိန်မှာ Wi-Fi ဟော့စပေါ့ ) အဖြစ် အိမ်မှ။ ဒါ့အပြင်ဆကျသှယျနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဝန်ထမ်းအကြားတစ်ဦးအလုပ်လုပ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်; iWorkers e-အလုပ်သမားများ, နဲ့ Web အလုပ်သမားများလည်း Self-အလုပ်အလွတ်ကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မည်။
လမ်းသူရဲမကြာခဏစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားများအတွက်သို့မဟုတ်မကြာခဏလမ်းမပေါ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်ကြ၏; သင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ပေါ် မူတည်. , ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသောသူတို့၏အလုပ်အများဆုံးလုပ်ပေးသူကိုပညာရှင်များလည်းပါဝင်သည်ပေလိမ့်မည်။ ဟိုတယ်များအတွက်လေဆိပ်မှာနှင့်ပင်၎င်းတို့၏ကားများ (စာသား, မိုဘိုင်းရုံးများ) ၏ထွက် - ကဲ့သို့သော, လမ်းသူရဲသူတို့လက်ပ်တော့သုံးနိုငျနေရာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ "အိမ်ရုံးများ" အောင်, အဝေးမှအလုပ်လုပ်သူတွေကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ လမ်းသူရဲအမှုကိုပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားပမာဏပေါ် မူတည်. လည်းဆကျသှယျစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆကျသှယျမှုအရေအတွက်ကိုတိုင်းတာကြောင်းစစ်တမ်းများအများအားဖြင့်နေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်ဖို့သူတွေကိုနှင့်အတူလမ်းသူရဲမပါဝင်ပါဘူး။
"မိုဘိုင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ" နှင့် "ဝေးလံခေါင်သီလုပ်သားများ" သူတို့အခြားအသုံးအနှုန်းများပတ်ဝိုင်းရန်လုံလောက်သောကျယ်ပြန့်, ဒါပေမယ့်လည်းဖော်ပြရန်ကြောင့်ငါကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြရန်အများဆုံးအသုံးပြုနှစ်ခုအမည်များဖြစ်ကြသည်။ ငါများသောအားဖြင့်သို့သော်တစ်ဦးဆကျသှယျအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရည်ညွှန်း။
"cubicle နေထိုင်သူ" မဟုတ်သောလုပ်သားများကိုဖော်ပြရန်တို့သည်ကြီးစွာသောများစွာသောအခြားသစ်ကိုဝေါဟာရများရှိနေပါသည်။ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးထဲကတချို့ဟာ - "ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်လျက်", "တည်နေရာလွတ်လပ်သောပညာရှင်များ" နှင့် "technomads" - ဝေးလံသောအလုပျသမားဘယ်နေရာကနေမဆို၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များလုပ်နေတာရှိလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထင်ဟပ်။ "ကို virtual လုပ်သားများ" (ကျနော်တို့, တကယ်တော့, စစ်မှန်, အမှန်တကယ်လုပ်သားများဖြစ်ကြသည်) ဖြစ်ပါသည်အဖြစ် "အိတ်ဆောင်ပညာရှင်များ" သို့သော်, (ဒီကျနော်တို့အလွယ်တကူန်းကျင်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်ဆိုလိုတာ?) ကိုငါ့ထံသို့ထူးဆန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကိုယျအဘို့ကြိုက်တတ်တဲ့ဘယ်ဟာကိုအမည်, သော်လည်း, ထို takeaway အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: အကျိုးကျေးဇူးများကို telecommuting သင်နှင့်နှစ်ဦးစလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ။ တစ်နေ့တွင်ကျွန်တော်ပင် (အခြားတဦးတည်းရှိတယ်!) အလုပ်ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်အပေါငျးတို့သညျဤအမြိုးအစားအဘို့တယောက်တံဆိပ်ကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆပေလိမ့်မည်။
တစ်ဦး Modem အဖြစ်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဘယ်သို့ငါမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် Apps ကပကိုတိုးနိုင်ပါသလား?
သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိုဘိုင်း Device ကိုလျှောက်လွှာ Creating
တစ်ယိုဖိတ်ပြီးနောက်သင့် Laptop ကို Save လုပ်နည်း
ITunes ကို 11 ALAC မှဂီတ CD များ Rip လုပ်နည်း
မိုဘိုင်း App ကိုတံဆိပ်တပ်: တစ်ခိုင်ခံ့သော App ကိုအမှတ်တံဆိပ် Developing
Google က Street View အဘို့ကြီးသောအသုံးပြုခြင်း
Steam.dll တွေ့သည်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မအမှား Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
ရှေ့ဆောင် Elite VSX-91TXH 7.1 Channel ကို Receiver ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
IOS6ကို: အဆိုပါအခြေခံ
Instagram ကို, Snapchat နှင့်ဘန်ပါကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ podcasts မြှင့်တင်ရန်
စာတိုက်ပရိုတိုကော (POP ကို)
အဘယ်အရာကိုဂရစ်ဖစ်ဆိပ်ကမ်း (AGP) Accelerated ပါသလား
သင့်ရဲ့ Android ကိုတစ်ဦးက Task ကို Killer App ကိုလိုအပ်ပါသလား?
Macs နှင့်နေအိမ်ပြဇာတ်ရုံ: သင့် HDTV သင်၏ Mac ကိုချိတ်ဆက်ပါ
Apple ကမေးလ်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်း Tools များအသုံးပြုခြင်း
ဘယ်လိုကူးပါမှသို့မဟုတ်သွင်းကုန် Google ကပြက္ခဒိန်
ဖြစ်သော CBS All Access အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
DNS ကို (Domain Name System) ဆိုတာဘာလဲ
Microsoft က Access ကိုအတွက် Northwind နမူနာ Database ကို Install လုပ်နည်း
တစ်ဦး XPI ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးဝက်ဘ်ဆိုက်မှအကွိမျမြားစှာဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်များထည့်သွင်းခြင်းအဘို့အ Options ကို
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ iPad ကိုတစ်ဦးက Wired Keyboard ကိုချိတ်ဆက်ပါမှ
အိုင်ပက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Cloud သိုလှောင်မှု Options ကို
Apple က TV ကို3ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦးက New Keyboard ကိုဝယ်ယူသည့်အခါစဉ်းစားကြည့်ပါရန်အရေးကြီးအင်္ဂါရပ်များ